Rehefa mampitaha sata manokana fiaramanidina fiaramanidina vs. kilasy voalohany ara-barotra fiaramanidina lalitra mihevitra tapa-tsaina, ny fiainana manokana, endri-javatra manokana sy ny manovaova Tsidika. Raha seza kilasy voalohany tamin'ny airlines ara-barotra manome endri-javatra manokana tambo isaina toy ny seza mampahazo aina amin'ny legroom fanampiny, sehatr'asa lehibe, laharam-pahamehana kilasimandry / Fivoahan'ny tombontsoa, ary koa ny sakafo sy zava-pisotro fiderana amin'ny tranga sasany, endri-javatra ireo dia mety tsy ho ampy ho an'ny sasany rivotra mpandeha, indrindra an'izay mitady manovaova kokoa sy namboarina tolotra. Fa toy izany manidina, Sata sidina fiaramanidina manokana ho safidy tsara kokoa noho ireto antony ireto:
Manovaova sy fiadanan-tsaina
Na dia eo aza manidina kilasy voalohany ara-barotra teo amin'ny zotram-piaramanidina, ianao dia tokony ho amin'ny seranam-piaramanidina iray ora maro alohan'ny sidina. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, beholden ianao ho any amin'ny airline ny fandaharam-potoana. Ary, raha tsy misy ara-barotra manidina zotram-piaramanidina mivantana ny toerana halehany farany, ianao dia tsy maintsy maka sidina mampitohy, izay afaka ny ho manahirana sy mampitombo ny mety ho very ny entana. Soa ihany, amin'ny fiaramanidina manokana sata sidina, ianao dia tsy mila miahiahy momba ireo zava-manahirana. manokana, ho afaka hanitsy ny fandaharam-potoananao Travel rehefa maniry, manidina mivantana ny tanjony sy ny entana ho azo antoka.
Ambony Fampiononana sy Service
Marina aloha, kilasy voalohany tolotra ara-barotra fiaramanidina seza endri-javatra lehibe sasany, anisan'izany ny seza mampahazo aina be, Internet haingam-pandeha fidirana ary isan-karazany ny fialam-boly safidy. Na izany aza, ireo endri-javatra ireo na dia tsara kokoa ao amin'ny sata manokana fiaramanidina fiaramanidina. Ohatra, ny seza faritra amin'ny fiaramanidina manokana matetika mitovy avo-end efitra fandraisam-bahiny. Inona koa, amin'ny fiaramanidina manokana, ianao dia hanana ny fahafahana hanova ny seza faritra araka izay irinao. Ny sakafo sy ny zava-pisotro natolotra tamin'ny fiaramanidina manokana sata sidina ihany koa ny ambony kalitao sy manolotra isan-karazany kokoa.
Rehefa mampitaha sata manokana fiaramanidina fiaramanidina vs. kilasy voalohany ara-barotra airline lalitra, tokony handinika lafin-javatra toy ny tapa-tsaina, ny fiainana manokana, endri-javatra manokana sy ny manovaova. Contact antsika amin'izao fotoana izao ny boky iray sata manokana fiaramanidina fiaramanidina.